एमपी सुब्बा एउटा फिल्म तयार हुन ५० देखि ७० जनाको ‘टिमवर्क’ चाहिन्छ । त्यो ‘टिमवर्क’मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमध्ये हुन्, प्राविधिक । तिनै प्राविधिकले फिल्म क्षेत्रमा निर्देशक, निर्मातादेखि लिएर हिरो–हिरोइनसम्मको
एमपी सुब्बा ‘गीतसंगीत मनोरञ्जनको माध्यम हो’, समाजमा यही सोचाइ व्याप्त छ । तर, गीतसंगीत सामाजिक सेवाका लागि प्रभावशाली माध्यम बन्दोरहेछ भन्ने एक उदाहरण गायक तथा समाजसेवी पुर्ण फावेन लिम्बूले पेस
गुराँसै फुल्यो वनैमा…! (फोटो फिचरसहित)
नारायण ढुंगाना ओखलढुंगा, ३ वैशाख । यतिबेला हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फुलेको छ । विभिन्न प्रजातिको रंगीविरंगी गुराँसले वन सुन्दर बनाएको छ भने आगन्तुकलाई लालायित पार्ने गरेको
पाहुनालाई माटो र टोपी ‘उपहार’
दमौली, २९ चैत । नेपाली भाषाका धरोहर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कवि सम्मेलनका सहभागीलाई भानु भूमिको माटो उपहार दिइने भएको छ । गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्च
भारतमा बिहीबार मतदान हुँदै, कसले जित्ला चुनाव ?
एकराज पाठक काठमाडौं, २७ चैत (रासस) । भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि भोलि बिहीबारदेखि मतदान हुँदैछ । निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ । निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने
काठमाडौं, २७ चैत । यस वर्षको ‘राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान–२०७५’ नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठनका पूर्व कुलपति वैरागी काइँलालाई प्रदान गरिने भएको छ । नेपाली कलासाहित्य डटकम प्रतिष्ठानले विगत ११ वर्षदेखि हरेक वर्ष भाषा,
होमशंकर बास्तोला कवि एवम् नियात्राकार छविरमण सिलवालको ‘ग्रीनबीचको साँझ’ नियात्रासङ्ग्रह वेलायत यात्राको यथार्थ वर्णन हो । नियात्रा वास्तवमा कुनै स्थानको भ्रमण गर्दा, यात्रा गर्दा, अवलोकन गर्दा, घुम्दा आफूले भोगेका अनुभव,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहित्यकार महेश थापाद्वारा लिखित पुस्तक मरिचिकाको आज विमोचन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सो पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो । आफैं